Vaovao - FOSHAN CITY SHUNDE MINGSANFENG MOLD CO., LTD
Booth Isa: 14 B61
Manasa anao hitsidika ny CHINAPLAS 2021
Manasa anao / anao izahay Orinasa hitsidika ny trano heva misy anay ao CHINAPLAS 2021, izay hatao amin'ny 13‐16 MEY 2021 amin'ny Shina Import & fanondranana Fair Complex, Shenzhen,Guangdong Oh Sina.
Amin'ny maha-vahininay azy, halefa ny saram-pidirana mankany CHINAPLAS 2021 amin'ny RMB80 isan'olona (mandritra ny 4 andro fitsidihana). Tsidiho azafady ny rohy etsy ambany13 Aprily 2021, 10:00 (ora Beijing) mba hamenoana ny fisoratan'ny mpitsidika, ary ampidiro ny FreeEntry Code mandritra ny fizotran'ny fisoratana anarana mba hankafizanao ny tombontsoanao mitsidika maimaimpoana.
Asehoy ny tantara
Manaraka ny fitomboan'ny indostrialy plastika sy ny rubber ao Shina mandritra ny 30 taona mahery, CHINAPLAS dia nanjary fihaonana niavaka sy sehatra fandraharahana ho an'ireto indostria ireto ary nandray anjara betsaka tamin'ny fampandrosoana mandroso azy ireo ihany koa. Amin'izao fotoana izao, CHINAPLAS no fampiroboroboana plastika sy varotra fingotra manerantany, ary eken'ny indostria koa ho iray amin'ireo fampirantiana manan-kery indrindra eran'izao tontolo izao. Ny zava-dehibe dia mihoatra an'i K Fair any Alemana ihany, ny varotra plastika voalohany sy ny varotra fingotra.
Hetsika nankatoavin'ny UFI
CHINAPLAS dia voamarina ho "hetsika ankatoavin'ny UFI" nataon'ny Global Association of the Exhibition Industry (UFI), vondrona iray solontena eken'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena. Ity fanekena ity dia mampiseho bebe kokoa ny rakitsoratry ny CHINAPLAS ho hetsika iraisam-pirenena, miaraka amin'ny fenitra arak'asan'ny fampirantiana sy serivisy fitsidihana ary koa fitantanana tetikasa misy kalitao.
Notohanan'ny EUROMAP tany Shina
Hatramin'ny 1987, CHINAPLAS dia nahazo fanohanana maharitra avy amin'ny EUROMAP (Komitin'ny Eoropeanina mpanamboatra milina ho an'ny plastika sy orinasa vita amin'ny fingotra) ho mpanohana. Amin'ny fanontana 2021, dia ho andiany faha-31 misesy ity hahazoana EUROMAP ho mpanohana irery any Sina.
Ao amin'ny CHINAPLAS 2021, afaka mahita ianao
Vahaolana famokarana faran'izay mahomby izay nomen'ireo mpampiranty 3.500+ eran'izao tontolo izao Teknolojia mafana sy voalohany novolavolaina, ary milina 3800+ aseho amin'ny fampahalalana farany momba ny tsena sy ny fironana miantra amin'ny fampandrosoana indostrialy Fotoana mety hararaotin'ny tambajotra.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny foara dia tsidiho azafady www.ChinaplasOnline.com
Manantena ny hahita anao ao amin'ny CHINAPLAS any Shenzhen!